The uru nke na-eji SoonLink Ars.
1.Get nzaghachi na-arụpụta na-adị mfe na-ntabi-
2.Engage na-ege gị ntị, ụmụ akwụkwọ
3.Liven gị ngosi
5.Increase na ntị nke ndị kiriri
Gịnị bụ uru nke SoonLink Ars?
1.2.4GHz ugboro wireless, ọ dịghị WiFi mkpa;
2.Long anya nkwurịta okwu, ruo 100 mita.
3.NFC maka paring.
4.Classic dịruru ná njọ e mere na nkenke ọrụ interface, nnọọ mfe iji.
5.Instant, ezi pụta ma na--e dere dị ka Excel maka mgbe e mesịrị iji.
6.No mmachi nke ọrụ ike.
7.Wonderful ahụmahụ nke na-eji oge obula na ebe ọ bụla.
8.Low price n'ezie.
Gịnị bụ a ezigbo oge wireless na-ege ntị omume usoro (Ars)?
A ezigbo oge na-ege ntị omume usoro bụ a usoro maka ịnakọta data si a plurality nke ndị zaghachirinụ na-enwe a Central òkè na a Central processor na a isi ojii na a remote òkè na a plurality nke wireless nzaghachi nkeji zaghachirinụ na-kpaliri ịbanye nzaghachi data ka a anya nke nganu uche ngosi nke nwere ike na-egosi ndụ, na a telivishọn monitor ma ọ bụ nwere ike taped. The ngosi pụrụ ịgụnye multiple nhọrọ ajụjụ. The Central processor accumulates nzaghachi data na redio, ngwa anya ma ọ bụ now nkwurịta okwu njikọ na ime nkeji, ọ bụla nke nwere a pụrụ iche na adreesị. The Central processor egosiputa akwakọba nzaghachi data na n'ezie na oge na ike machie esichara nzaghachi data na sitere ngosi gosiri ndị zaghachirinụ.
Gịnị nwere ike na-SoonLink Ars ga-eji?
The SoonLink Ars bụ zuru okè n'ihi na a nso nke ojiji tinyere na-ezi mmekọrịta, nzute votes na nzukọ nnyocha e mere. Ha nwekwara ike-eji na-ekwe ka ndị bịara inye nzaghachi n'oge mkpara ọzụzụ, noo na n'ihe ize ndụ nnwale. Ọ bụla oge na ị chọrọ na votu na otu ihe iseokwu ma ọ bụ kpokọta ozi si a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ, SoonLink Ars bụ n'ụzọ zuru okè na-eme ya.
Gịnị ka SoonLink Ars iso nke?
The SoonLink Ars nwere ngwaike na software. The hardware mejupụtara a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke wireless keypads (ruo 2000) na a wireless erite na a USB cable. The software nwere ike arụnyere na kọmputa gị n'agbanyeghị na-agba ọsọ usoro bụ Microsoft Windows ma ọ bụ Mac OS.
Olee otú keypads-arụ ọrụ?
SoonLink wireless ịtụ vootu igodo bụ gburugburu size of a kaadị. The keypads na-nyere onye ọ bụla nọ na klas, a ogbako ma ọ bụ a nzute. The pad-ekwurịta okwu na a achịcha na-size wireless erite nke na-ejikọ na a na kọmputa site na a USB cable, akada Ibọrọ ajụjụ ọ bụla zuru ezu ziri ezi. Nke a pụrụ ịbụ ihe bara uru dị ukwuu iji chịkọta nzaghachi dị ka ọ na-enye ohere maka kpamkpam amaghị Ibọrọ na-adịghị ada site na ìgwè mmadụ ahụ. The results na-na-collated na egosipụta fọrọ nke nta ozugbo. Nke a bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ntuziaka usoro nke ịtụ vootu ma ọ bụ nzaghachi nzukọ.